I-Bang entsha ne-Olufsen Beoplay EQ zikumgangatho we-AirPods Pro | IPhone iindaba
I-Bang entsha ne-Olufsen Beoplay EQ zikumgangatho we-AirPods Pro
UToni Cortés | 29/07/2021 20:00 | Ukhuphiswano
Ukuba undixelela ukuba ii-headphone ezintsha ezingenazingcingo ziya kuphehlelelwa ezinokwenza ukhuphiswano ngqo kwi I-AirPods Pro, a priori ndithandabuza kakhulu ukuba bakulowo msebenzi. Kuba itekhnoloji eninzi ipakishwe kwisixhobo esincinci kangako.
Kodwa ukuba kuyabonakala ukuba umenzi nguBang & Olufsen, izinto ziyatshintsha. Ukuba umntu uyakwazi ukwenza ii-headphones ngenqanaba lomgangatho elilinganayo okanye ngaphezulu kune-Apple's AirPods Pro, ngaphandle kwamathandabuzo yinkampani yaseDenmark. Entsha I-Bang kunye ne-Olufsen Beoplay EQ. Kwaye zinomtsalane.
Inkampani yaseDenmark egxile kakhulu kwizixhobo zomsindo zepremiyamu iBang & Olufsen isandula ukuhambisa ii-headphone zayo zeBeoplay EQ ezindlebeni, ezigqitha iAirPods Pro ekusebenzeni, kwaye nangona kubonakala kungenakwenzeka, nayo xabiso.
Ke ngesikhephe kungekudala, abakwaDanes bababonisile ngezinto ezintle: ukutshaja ngaphandle kwamacingo, ukurhoxiswa kwengxolo okusebenzayo, kunye nobomi bebhetri obukhulu.
Sele zibhengeziwe kwi webhsayithi ukusuka kwi-B & O, kunye nomhla wokulindelwa wokuqala wokuhanjiswa kwe Agasti 19. Azinakuthengwa okwangoku, kodwa ungabhalisela isilumkiso se-imeyile esiya kukwazisa xa sele zifumaneka kwintengiso.
Ngokomgaqo, ii-headphone ngokwazo zinobomi bebhetri obuninzi kune-AirPods Pro (iiyure eziyi-6,5 xa kuthelekiswa neeyure eziyi-4,5 ze-Apple). Kwelinye icala, ukuba nathi sibala ibhetri yamatyala, Ii-AirPods Pro ziphumelela umdlalo. Lilonke, iiyure ezingama-20 zibala ukuvuselelwa kweebhokisi ngokuthelekiswa neeyure ezingama-24 ze-AirPods Pro.
Zigqwesa ii-AirPods Pro .. nangamaxabiso.
I-Beoplay EQ isebenzisa Bluetooth 5.2 (Ii-AirPods Pro 5.0) kwaye ziyahambelana neeprotocol AAC, SBC y I-aptX eguqukayo. Kwaye njengoko unokucinga, i-B & O ikwagqitha i-Apple kwiXabiso. Ngoku i-AirPods Pro ebiza ama-279 eeyuro iya kubonakala ngathi ayibizi mali xa ithelekiswa ne-Beoplay EQ eya kuthi ithengiswe malunga nama-450 eeuro kungekho nto….
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Ukhuphiswano » I-Bang entsha ne-Olufsen Beoplay EQ zikumgangatho we-AirPods Pro
UApple ukhupha iwotsOS 7.6.1 uhlaziyo lokhuseleko
Amanqaku amatsha avuza ikamva le-iPad Air 5, i-iPad Mini 6 kunye ne-iPad 9